टाट अर्थतन्त्र, समृद्धिको सपना ! | Everest Times UK
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रको जोखिमपूर्ण अवस्थाबारे श्वेतपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । यो स्थिति आउनुमा विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल मुख्य दोषी भएको टिप्पणी पनि भएकै छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यतः आर्थिक स्थिति कमजोर बनाउनमा राजनीतिक दलको व्यक्ति केन्द्रीत फाइदाका लागि नै भएको स्पष्ट भएको छ । यो तथ्यलाई दलहरुले पनि आत्ममूल्यांकन गरेकै हुनुपर्छ । तर दलका नेताहरु त्यति गर्ने पक्षमा छैनन् ।
टाट आर्थिक स्थितिमा अब समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला त ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ । बाम गठबन्धनले भन्दै आएको आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास र खुसी र सुशी नेपालीको सपना यस्तो टाट आर्थिक विकासले सम्भव होला ? यो पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न बनेर आएको छ । पूर्वाधार नै कमजोर बनेपछि थप राजनीतिक उपलव्धी हासिल गर्नका लागि, आर्थिक विकास गर्नका लागि कमजोर धरातलले कसरी सम्भावना होला त ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
शक्तिशाली बाम गठबन्धनको सरकारले देश र जनताको कायापलट, उथलपुथल विकास र समृद्धि गर्ने अठोट गरेकै छ । यस्तो अठोटकै पछाडि लागेर दलका नेताहरुले भोट मागे । भोग मागे, जनताले दिए । बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले जिते । यो जित राजनीतिक तालमेलका कारण मात्र सम्भव भएको होइन ।
यो जित त पक्कै पनि बाम गठबन्धनको गतिलो नाराको प्रभाव पनि हो । ती नारा र घोषणापत्रको प्रभावले बाम गठबन्धनका नेताहरुले चुनाव त जिते । अहिलेको स्थितिमा पक्कै पनि आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । यो स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि पक्कै पनि महत्वपूर्ण कदम चाल्नैपर्छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा मात्र दिएर हुँदैन । यो कामलाई सार्थक बनाउने हो भने अब हिम्मत गर्नैपर्छ । यो स्थितिमा न त सार्थक विकास हुनसक्छ, न त आर्थिक विकास नै । यसमा सुधार ल्याउनका लागि सम्पूर्ण रुपमा कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउँदै, नेता र मन्त्रीहरुमा स्वार्थीपना हटाउनैपर्छ ।
त्यसो हुन सकेन भने खोक्रो नाराले मुलुकको विकास सम्भव छैन । विकासका लागि पक्कै पनि राजनीकि आँट र अठोट अपरिहार्य छ । जुन अहिलेको सरकारबाट सम्भव पनि छ । वर्तमान सरकारका सामु अब कुनै पनि बहानामा बाहिर उम्कने फुत्कने छुट छैन । दलबल र शक्तिका हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको यो सरकारका सामु एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो र चुनौती पनि । तर असम्भव केही छैन । टाट अर्थतन्त्रलाई समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा सार्थक कदम चाल्नैपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।